Nyefee Music si gam akporo ka iPhone / iPad / iPod
Gaa na akara ngosi nke TunesGo na PC gị na na abụọ pịa ya. The software ga-emeghe na a n'ụlọ ihuenyo dị ka n'okpuru ga na-ahụ.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ Android
Ugbu a ị chọrọ jikọọ gị Android ekwentị site nke ị chọrọ nyefee music. Were USB na jikọọ na n'otu nsọtụ na ekwentị na ndị ọzọ na ndị USB n'ọdụ ụgbọ mmiri nke gị PC. Ozugbo ejikọrọ, na Android ga-apụta n'okpuru Ngwaọrụ nhọrọ na n'aka ekpe nke TunesGo n'ụlọ peeji. (Nseta ihuenyo egosi SamsungGT-I9300 dị ka ejikọrọ ngwaọrụ)
Ugbu a jikọọ gị iOS (iPhone / iPad / iPod) ngwaọrụ nke music kwesịrị ka a bufee. Ngwaọrụ nwere ike jikọọ na n'otu ụzọ ahụ dị ka Android ekwentị ejikọrọ. On ịga nke ọma njikọ, ngwaọrụ gị ga na-ahụ n'okpuru Ngwaọrụ nhọrọ na n'aka ekpe nke TunesGo n'ụlọ peeji. (Nseta ihuenyo egosi ejikọrọ iPhone, iPad, iPod karị).
Gaa na "Music" nhọrọ n'okpuru Android ngwaọrụ na aka-ekpe-n'akụkụ na ga-egosipụta na ndepụta nke songs dị na ekwentị gị.
Nzọụkwụ 5. Họrọ Songs
Họrọ songs na ị chọrọ nyefee. (The ihuenyo ogbugba egosi 3 songs dị ka họrọ otu)
Nzọụkwụ 6. Iji "Export Iji" ọrụ
N'elu mmanya nke TunesGo n'ụlọ peeji nke, pịa na "Export Iji" ọrụ
Nzọụkwụ 7. Họrọ iche ngwaọrụ
Site nyere ndepụta nke ngwaọrụ n'okpuru Mbupụ na nhọrọ, họrọ onye nke ị chọrọ egwu na-agafere. (Nseta ihuenyo egosi Yuki si iPhone dị ka họrọ ngwaọrụ)
Nzọụkwụ 8. Export ka iOS ngwaọrụ
N'elu na-ahọpụta ndị iOS ngwaọrụ, họrọ songs ga-agafere na pụrụ hụrụ n'okpuru Music nhọrọ na n'aka ekpe nke ezubere iche ngwaọrụ (nseta ihuenyo egosi họrọ songs dị ka depụtaghachiri n'okpuru Music nhọrọ n'okpuru Yuki si iPhone)
Ọzọ: iTunes ka iPhone / iPad / iPod